Culimada Boosaaso oo ku eedeyay Dilka Dr.Axmed Xaaji Xarakada Alshabaab – SBC
Culimada Boosaaso oo ku eedeyay Dilka Dr.Axmed Xaaji Xarakada Alshabaab
Posted by Webmaster on December 5, 2011 Comments
Culimada manta ka hadashay Aaska alle ha u naxariistee Sheekh Axmed Xaaji C/raxmaan ayaa sheegay in dilka sheekha ay soo abaabuleen sida ay hadalka u dhigeen Xarakada Alshabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya.
Sheekh C/qaadir Nuur Faarax oo ka mid ah culimada waaweyn ee Puntland iyo Soomaaliya ayaa goobta aaska kula hadlay Dadweyne Boqolaal gaaraya kuwaasi oo uu u sheegay in dilka Marxuumka ay geysteen Alshabaab.
“Dadweynuhu inay fahmaan ayaa loo baahan yahay PIS wax ma dilin namana leyso anaga xogta waa ognahay wadankana waa joognaa shabaab weeye waxa dadka dhameeyay, Axmed Xaaji C/raxmaana gacantooda ayuu ku dhintay,Anaga sidaasey noogu dhaarsan yihiin oo goobtaas (Shirka Baydhabo )ay nooga magacaabeen oo waa sugeynaa ajashu waqti bay leedahay baqdin nama hayso”.Sidaas waa sheegay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax.
Hadalka ka soo baxay culimada Puntland ayaa waxaa uu imanaaya xilli Culimaa’udinka Boosaaso ay isku diyaarinayaan barnaamij gaaar ah oo deeq loogu uruurinayo dadkii hantidooda ay ku gubatay suuqa Boosaaso oo u baahan gacan weyn oo taakulo ah.
Dhinaca kale ma jirto wax war ah oo ka soo Baxay Xarakada Alshabaab oo ku aadaan eedeyynta ay u jeediyeen Culimada inay ka danbeeyeen Dilalkii ugu danbeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo Puntland.
Dhageyso Khudbada Sheekh C/qaadir Nuur Faarax.
Click Here…. DHAGEYSO
waa dhici kartaa,sida shiekh Cabdulqadir N. Faarax,yiri in ay ka danbeeyeen,Al-shabaab,laakiin,weli waa tuhun,oo xaqiiqo ma aha,inta la soo qabanaayo,kuwii gaystay,falkan waxashnimada ah,banaystayna dhiiga muslimiinta,waa in shacbiga puntland iyo xukuumadaba ay suuragal ka dhigaan,in aanay baxsan.dhagar falayaashan.
waxa uu u joosan la’yahay dilakani qorshaysan,waxa ugo wacan,kuwa gaysta,oo aan marna la soo qaban.marka taasi waa in wax iska bedelaan.
dayib cabdi says:
innaa lillaahi waa innaa iliyhi raajicuun waa geeri naxdin
leh shiikh Axmed Xaaji Cabdiraxman waxaan illahay uga baryayaa in uu naxariistii jano kawarabiyo waxaan uga tacsayadaynayaa dhamaan eheladiisii oo dhan in samir iyo iimaan alle kasiiyo ma ahayn shiikhu nin kadhintay qoos ee wuxuu ahaa nin kadhintay dhamaan umada soomaaliyeed oo dhan ee dhamaan dood samir iyo iimaan alle hakasiiyo bedel khayr qabana how galiyo booskiisii kuwii dilayna alle ifka iyo aakhirba ha ku ciqaabo waa daalimiin loo soo diray umada oo indhaha karidaya laynayana biri ma geydadii iyo aqoontii dadka
cabdifitaah axmed warsame says:
alaha u naxariisto aad bana uga xumahay
dilkaas janadii fardowsa alaha geeyo
samirna alaha inaga siyo
umada reer puntland waxaa iga fartiin ah
midaan an soo wado dilka axmed xaji loo gaystay
ma ahan mid kaligiis ku ekanaya waa mid sii soconaya
oo ina wada sugaya umada waxaan ka codsanaya inay la shaqeeyan dowlada tagta daran ee mesha ka jirta si loo helo alaha cadaabe aduun iyo aaqirabe gacan ku dhiiglihii dilay abtigay naxariisti alaha ugu bishaareeyo
Dadka Waa la yaqaan waxa wax dila waa alshabab kuwaas ayaa dadka dhameeyey. Waxaan dhihi lahaa in kuwaas gaalada ah meel looga soo wada jeesto. Qabaailka iyagaa isku dira siday hadba reer wax uga laynayaa waax qorshe koorfur laga soo abaabulay sidoo reer puntland oo qasi lahaa. Marka hurdada ha laga kaco ama dee aan iska dhammaano.
marka hore allaha unaxariisto shiikha jannadii fardowsa hakawaraabiye marka xigta waxaan oran lahaa waxa somaliya hadda kasocda waa wax cajiib a h oo laoran karo fidmo marka in laga aamusa bay kuficantahay